Waxqabadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee Usbuucii La Soo Dhaafay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Waxqabadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee Usbuucii La Soo Dhaafay
Waxqabadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee Usbuucii La Soo Dhaafay
Mogadishu (XT): Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Dardargelinta Nidaamka Federaalka, Turkiga oo deeq waxbarasho siinaya 500 arday sanad walba, Jasiiradda Kudhaa oo Al-Shabaab laga saaray, Sacuudiga oo gar-gaar caafimaad u fidisay dhaawacyo, Dardargelinta Shuruucda Nidaamka Federaalka, Danbiilayaal lagu fuliyey xukunno dil ah, Dar-dargelinta dhameystirka Maamulka KMG ah ee Jubbaland iyo Dar-dargelinta Maamul Wanaaga.
Dardargelinta Nidaamka Federaalka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud 24kii Maarso si loo dardargeliyo howlaha maamul u sameynta Gobollada Dhexe. Madaxweynaha oo 3 cisho ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa kulamo kala duwan la yeeshay dhammaan qeybaha bulshada iyo madax dhaqameedka beelaha deegaanka. Ujeedada kulamadan ayaa ahaa sidii xal waara oo dib u heshiisiineed loogu heli lahaa dadka deegaanka si maamulka ay sameysanayaan uu u noqdo mid loo dhan yahay oo si nabad ah ay dadka deegaanka uga wada qeybqaataan. Madaxweynaha ayaa odoyaasha kala hadlay sidii natiijooyin wax ku ool ah ay uga soo bixi lahaayeen shirka dib u heshiisiinta ee Dhuusamareeb, isagoo intaa ku daray Madaxweynuhu in dowladda ay mar waliba garab taagantahay dhaqan gelinta go’aanada dib u heshiisiineed ee ka soo baxa shirka. Dowladda Federaalka ayaa in muddo ahba waday dadaalo lagu doonayo in maamulada KMG ah ay si dhaqso ah uga dhismaan ugana hirgalaan gobollada harsan sida gobollada dhexe, Hiiraan, Shabeelaha Dhexe iyo Banaadir.
Turkiga oo deeq waxbarasho siinaya 500 arday sanad walba
Safiirka Dowladda Turkiga ee Soomaaliya Mudane Olgan Baker oo 25kii Maarso booqday Jaamacadda SIMAD ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadeyso taageerada horumarineed iyo tan waxbarasho ee ay siiyaan dadka Soomaaliyeed. Safiirka Turkiga ayaa yiri “Waxaan horayba u wadnay taageero aan siineyso jaamacadaha Soomaaliyeed, anagoo ugu deeqnay kombiyuutaro iyo qalab kale waana sii wadi doonaa teegeeradaas aan siineyno iskuulada iyo jaamacadaha. Fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah waa mid muhiim noo ah sanad kasta waxaan bixinaa deeq waxbarasho oo aan siinaa shan boqol oo arday oo Soomaali ah”. Sidoo kale danjiruhu wuxuu sheegay in dowladda Turkigu ay mashaariic horumarineed oo badan ay ka waddo waddanka, kuwaas oo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaale sida dekadda iyo garoonka diyaaradaha iyo qaar kale oo xiriir la leh arrimaha gargaarka bani aadanimmo iyo dib u dhiska asagoo tilmaamay inay sii wadi doonaan mashaariicdaas. Danjire Olgan Baker ayaa kormeeray qaybaha jaamacadda SIMAD isagoo kulan gaar ah la qaatay maamulka jaamacadda. Gudoomiyaha jaamacadda SIMAD Daahir Xassan Carab ayaa uga Mahad celiyay danjiraha, shaqada uu ka hayo waddanka wuxuuna si gaar ah u xusay taageerada ay siiyaan jaamacadaha waddanka iyo ardayda Soomaaliyeed ee ay deeqaha waxbarasho dalkooda ugu qaadaan.
Jasiiradda Kudhaa oo Al-Shabaab laga saaray
Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa Jasiiradda Kudhaa oo ku taala gobolka Jubadda hoose ee koonfurta Soomaaliya ka xoreeyay maleeshiyaadka kooxda Nabad-diidka ee UGUS 22kii Maarso 2015, kadib howlgallo ay halkaas ka sameeyeen. Kudhaa waxa ay ka mid aheyd goobaha ay maleeshiyaadka UGUS ku xoog badnaayeen iyadoo u aheyd saldhig muhiin ah oo sahayda iyo howlgallada ee koonfurta Soomaaliya ay ka fuliyaan, sidoo kale waxa ay Kudhaa aheyd goob ay ka dhoofiyaan dhuxusha taas oo horey Dowladda Soomaaliya u mamnuucday. Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa AMISOM Amb. Maman Sidikou ayaa u hambalyeeyay ciidammada Xoogga Dalka iyo kuwa AMISOM guusha ay ka gaareen howlgalkaas. Dowladda Federaalka oo in muddo ahba waday dadaalada dalka looga sifeynayo maleeshiyaadka nabad-diidka ah ee UGUS ayaa sheegtay in Kudhaa oo goob istraatejiyad ah ku taalay ay shacabka degaankaas helayaan neecow nabad iyo nolol. Dowladda ayaa ku celcelisay sida ay uga go’antahay in dalka nabad laga wada dhigo, kuna celisey baaqii ahaa in maleeshiyaadka ay nabadda qaataan oo ay ka tanaasulaan collaadaha iyo dagaalada.
Sacuudiga oo gar-gaar caafimaad u fidisay dhaawacyo;
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 24kii Maarso waxa uu garoonka Muqdisho ku sii sagootiyey qaar ka mid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyo horey uga dhacay Soomaaliya. Dhaawacyadan ayaa waxaa qaaday labo diyaaradood oo qalabkii caafimaadka ku rakiban iyagoo loo qaaday waddanka Boqortooyada Sacuudiga. Madaxweynaha ayaa dhaawacyada ALLE uga baryey inuu caafimaad siiyo, ugana mahadceliyey dowladda Sacuudiga sida ay umadda Soomaaliyeed u caawiyeen. Wasiirka Caafmaadka Xaawo Xasan Maxamed ayaa sheegtay in dadka la qaaday guud ahaan ay yihiin 21 qof oo 18 ka mid ah ay yihiin dadkii ku dhaawacmay Qaraxii ka dhacay Central Hotel ee Muqdisho. Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibedda Soomaaliya, Khaalid Cumar Cali ayaa tilmaamay in Dowladda Sacuudiga akhbashay in ay dhaawacyadan dalkeeda u qaaddo si loogu soo dabiibo, waxa uu intaa raaciyey in Xukuumadda Soomaaliya ay si kal iyo laab ah uga mahadcelineyso dowladda Sacuudiga.
Dardargelinta Shuruucda Nidaamka Federaalka
Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Federaalka oo in muddo ahba waday dadaalada maamul u sameynta iyo dhaqangelintooda ayaa bilowday dadaalo lagu dardargelinayo shuruucda nidaamka Federaalka oo muhiim u ah sidii maamulada Federaalka ay u noqon lahaayeen kuwo rasmi ah oo leh sharciyadii ay u baahnaayeen, taasoo qeexi doonta sidii awooda iyo dhaqaalaha loo wadaagi lahaa iyo xiriirka ka dhaxeyn doona Maamulada Gobollada iyo Dowladda Federaalka ah. 24kii Maarso 2015 ayey Wasaaradda Arrimaha Gudaha hirgelisay Siminaar labo cisho ah oo 32 ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya lagu barayey fahamka iyo horumarinta nidaamka Federaalka, muhiimada dib u heshiisiinta iyo dardargelinta shuruucda nidaamka Federaalka. Siminarka ayaa waxaa si wadajir ah u soo gaban qaabiyay Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka iyo hay’adaha Qaramada Midoobay oo kala ah UNDP iyo Xafiiska Siyaasadda ee Qaramada Midoobay ee UNSOM. Casharadda Siminaarka waxaa bixinayay Macalimiin iskugu jirta Soomaali iyo Ajaanib.
Danbiilayaal lagu fuliyey xukunno dil ah
Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida ayaa waxay xukunno dil ah ku fulisay danbiilayaal ay horey maxkamadda u xukuntay. Labo askari oo ka tirsanaa Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed oo horey dil u geystey dad shacab ah ayaa xukunnada dilka ah lagu fuliyey 24kii Maarso 2015. Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Ciidanka Qalabka Sida Gaashaanle-Sare Liibaan Cali Yarow iyo Gudoomiyaha Maxkamada darajada koowaad ee Ciidanka Gaashanle Dhexe Xasan Cali Shuute ayaa goobta ku sugnaa si ay u hubiyaan in xukunka maxkamadda la fuliyey. Maxkamada ayaa ku heshay Cabdiraxmaan Ciise Axmed oo 20 jir ah kana tirsanaa ciidanka Xooga Dalka in uu si ula kac ah u dilay Marxuum lagu Magacaabi jiray Siciid Dhiblaaawe Siyaad 29kii August 2012-kii, halka Cabdulaahi Cali Cabdi Cigaal oo isna ka tirsanaa Ciidanka Xooga lagu helay in uu si ula kac ah u dilay Marxuumiinta kala ah Maxamuud Xuseen Cabdi Marxuumad iyo Sahro Sheikh Cumar. Ujeedada fulinta xukunnadan dilka ah ayaa ah sidii dalka loo nabadeyn lahaa oo danbiilayaasha ay u oggaan lahaayeen inay sharciga hortagi doonaan, si falalka dilalka ah ay u yaraadaan. Tanoo kaalin mug leh ka qaadan karta xasiloonida dalka iyo sidii dalka u noqon lahaa mid amni ah oo la isku haleen karo.
Dar-dargelinta dhameystirka Maamulka KMG ah ee Jubbaland
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Mudane C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa), Wasiirka Tamarta iyo Batroolka Mudane Maxamed Mukhtaar iyo Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane C/raxmaan Xirsi Kulmiye ayaa gaaray Kismaayo 23kii Maarso 2015 si ay u soo kuurgalaan xulista xubnaha baarlamaaka ee Maamulka Jubbaland. Mudane C/raxmaan Maxamed Xuseen Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka oo la hadlay eregada madasha joogtay ayaa sheegay in maamulka Jubaland wax qabad muuqda ka sameeyeen gobolada Juabooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ay kamid tahay soo celinta nabadda iyo dib u dhiska. Wasiirka Arrmaha gudaha ayaa intaa ku daray in uu ku faraxsan yahay shaqada iyo howlaha ay wadaan maamulka Jubaland oo ku aadan dhameystirka maamulka isagoo tilmaamay in Dowladda Dhexe ay gacan ka geysan doonto howlaha maamulka Jubaland uu sameynaayo. Sidoo kale waxaa kulanka hadal ka jeediyay Madaxweynaha maamulka Jubaland Sheekh Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) waxaana uu tilmaamay in Jubbaland ay tahay meel Soomaali oo dhan u siman tahay isla markaana lagu soo dhaweynaayo, ayna ka go’antahay sidii loo dhameystiri lahaa Maamulka oo xubnaha baarlamaanka loo soo xuli lahaa. Xubnaha Wefdiga oo uu hogaaminaayo Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen ee xukuumadda Soomaaliya waxaa ay kulamo la yeesheen mas’uuliyiinta sare ee maamulka Jubaland ayagoo kala hadlay arimo ay kamid yihiin Amniga, dib u heshiisiinta iyo dhameystirka maamulka Jubaland.
Dowladda Federaalka oo in muddo ahba waday dhaqangelinta maamul wanaaga hay’adaha dowliga ah ayaa 22kii Maarso 2015 soo bandhigtay jagada Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda & Dhiirigelinta Maalgeshiga si cid allaale iyo cidii daneyneysa ay u soo dalbato oo tar-tan furan oo cad-cad la wada gelayo. Ujeedada ayaa aheyd sidii loo dhiiri gelin lahaa dadka aqoonta, waaya aragnimada iyo khibradda leh ee Soomaaliyeed si howlaha muhiimka ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda loogu helo shaqsi karti iyo aqoon leh oo Wasaaradda gaarsiin kara maamul wanaag dhan walba ah. Xayesiintan ayaa ku eg 5ta April 2015 iyadoo cidii daneyneysa la doonayo inay soo buuxiyaan shuruudaha isla markaasna ay araajidooda ama codsigooda si toos ah ugu soo dirayaan e-mailka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee ah hr@mofa.gov.so.
Previous articleUN Envoy Kay Condemns Terrorist Attack on Mogadishu Hotel
Next articleMadaxweynaha Soomaaliya oo La Kulmay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon